काठमाडाैंमा फेरि बढ्याे कोरोना संक्रमण, आज देशभर कहाँ कति थपिए ? — Sanchar Kendra
काठमाडाैंमा फेरि बढ्याे कोरोना संक्रमण, आज देशभर कहाँ कति थपिए ?
काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौं उपत्यकामा १११ महिला र १४० पुरुष गरी २५१ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । याे संख्यामा केहिदिन यता देखिएकाे संक्रिमतकाे संख्याभन्दा बढी हाे । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौंमा १९८, ललितपुरमा २८ र भक्तपुरमा २५ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालमा ४१२ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । ५ हजार १३२ जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा ४१२ जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको हो ।
योसँगै नेपालमा हालसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या २ लाख ६३ हजार ६०५ पुगेको छ । हाल ५ हजार ५८ जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा थप ४८३ जना कोरोना संक्रमणमुक्त भएका छन् ।
योसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण भएर निको हुनेको संख्या हालसम्म २ लाख ५६ हजार ६४४ पुगेको छ । उनीहरू देशका विभिन्न स्थानका अस्पताल तथा होम आइसोलेसनबाट संक्रमणमुक्त भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो।
पछिल्लो २४ घण्टामा थप ४ जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या १ हजार ९०३ पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच छिमेकी मुलुक भारतमा थप २० हजार जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
३ महिनादेखि संक्रमण घटेको भारतमा पछिल्लो २४ घण्टामा २० हजार ४६० जनामा संक्रमण भएको हो । पछिल्लो वृद्धिसँगै संक्रमितको संख्या १ करोड ३ लाख ९५ हजार ९३८ पुगेको छ । संक्रमितमध्ये अहिलेसम्म १ करोड १६ हजार १६३ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् ।
यस्तै त्यहाँ संक्रमणले मृत्यु हुनेको संख्या १ लाख ५० हजार ३७२ पुगेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा थप २२१ जनाको मृत्यु भएसँगै भारतमा कोरोनाले ज्यान गुमाउनेको संख्या १ लाख ५० हजार ३७२ पुगेको हो ।
यस्तै अमेरिकामा एकैदिन ४ हजार १०० कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ । तथ्याङ्क अद्यावधिक गरिरहेको साइट वर्ल्डोमिटर्सका अनुसार पछिल्लो वृद्धिसँगै बुधबार बिहानसम्म अमेरिकामा कोरोनाले ज्यान गुमाउनेको संख्या ३ लाख ६९ हजार ९०० पुगेको छ ।
पछिल्लो २४ घण्टामा २ लाख ६० हजार ९७३ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । यसअघि २७ मंसिरमा एकैदिन अहिलेसम्मकै धेरै ३ लाख ८६ हजार ६५४ जनामा संक्रमण भएको थियो । पछिल्लो वृद्धिसँगै अमेरिकामा संक्रमितको संख्या २ करोड १८ लाख ५७ हजार ६१६ पुगेको छ ।
संक्रमितमध्ये अहिलेसम्म १ करोड ३० लाख २४ हजार १४२ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् । उपचार गराइरहेका ८४ लाख ६३ हजार ४८४ जनामध्ये २९ हजार ३५ जनाको अवस्था गम्भीर रहेको वर्ल्डोमिटर्सले जनाएको छ ।
‘राजनीतिक जनपरामर्श सम्मेलन अबको विकल्प’
दाङ पुगेर माधव नेपालले गरे प्रचण्डकाे प्रशंसा
माथिबाट खसेको ढुङ्गा छल्न खोज्दा भिरबाट लडे प्रहरी हवल्दार, उपचार गर्दागर्दै मृत्यु
चितवनमा कृषि-पर्यटन क्षेत्रमा मौसमको पूर्व सूचना दिने प्रणालीको तयारी
सकियो प्रचण्ड-माधव समूहको स्थायी समिति बैठक, ओली र विष्णु पौडेलमाथि कारवाही गर्ने निर्णय
प्रधानमन्त्री ओलीले सुटुक्क फिर्ता लगे संसद विघटनको निर्णय, अब के हुन्छ ?
कसले चाेर्याे नेपाल–भारत पेट्रोलियम पाइप लाइनबाटै डिजल ?
नेकपा प्रचण्ड-नेपाल समूहको स्थायी कमिटी बैठक बस्दै